Meanings of F fa fab fabbers fabellae faberge Fabian fabianism fable fabled fablers fables fabliaux fabric fabricate fabricated fabrication fabrications fabricator fabricators
You are here: Pyidaungsu Myanmar Mini-Encyclopedia / F
"F" to "fabricators"
F, fa, fab, fabbers, fabellae, faberge, Fabian, fabianism, fable, fabled, fablers, fables, fabliaux, fabric, fabricate, fabricated, fabrication, fabrications, fabricator, fabricators, တို့၏ အဓိပ္ပါယ်များကို တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အမျိုးမျိုးဖြင့် အောက်တွင် ဖော်ပြထား ပါသည်။
Results 1 - 20 of 4887
`F` (နာမ်) # ဆဋဿဌမ အင်္ဂလိပ် အက္ခရာ။ F (music) C မေဂျာသံစဉ်တွင် ၄ ခုမြောက်အသံ။ ယင်း၏သံပုံ။ ငါးပေါက် သံ။
မွန်/Mon(ကြိယာ)t.(-gg-) သကုဪထုဲဂ႐ုဲ။ befogged (adj) မထုဲဂ႐ုဲဒၞံင္။ (ကြိယာ). ရုပ်ထွေးစေသည်။ `
`fa` (နာမ်) # FAH မေဂျာသံစဉ် တစ်ခုတွင် စတုတ္ထအသံ၊ သံပုံ။
နှစ်ချိုက်စရာ အလွန်ကောင်းသော ၊ [extremely] [pleasing
ရှမ်း/Shan[ၾပ်ႉ] ဢၼ်လီဢၢမ်း၊ ဢၼ်လီယွင်ႈ၊ ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆး။
(အများပြကိန်း။ ယင်း၏ အနည်းကိန်းမှာ- fabber)
ဟားခါးချင်း/Haka Chinkhuaruahharasimi ; zumh khawh ding ngaingaiasi lomi
(အများပြကိန်း။ ယင်း၏ အနည်းကိန်းမှာ- fabella)
ရုရှားနိုင်ငံမှ ရွှေပန်းတိမ် ၊ Russian [goldsmith] noted for [creating]a[series] of [jewel]ed and [enamel]ed Easter [eggs] (ကြောင်းတူသံကွဲ) (ဆန
ဟားခါးချင်း/Haka Chininnahmailei
`Fabian` (နာမဝိသေသန) # ရန်သူမောပန်း နွမ်းနယ်အောင်ပြုလုပ်သော။
ရှမ်း/Shan[ၾပီးယႅၼ်ႉ] ဢၼ်ဢဝ်လွၵ်းလၢႆးပရီႉယေသေ ႁႂ်ႈၽူႈသၢၼ်ၶတ်း/ ၶႄႉၶဵင်ႇတူၵ်းပႅတ်ႈ၊ ႁႂ်ႈႁႅင်းလဵၵ်ႉၵႂႃႇပႅတ်ႈ၊ ဢၼ်ဢဝ်လၢႆးပရီႉသေ ႁႂ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်သူဝ်ႇသႅဝ်ႇလိတ်ႉၵႂႃႇလွႆးလွႆး၊ ၽူႈႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ်။
မီဇိုချင်း/Mizo(febian) adj. fimkhur; hmanhmawh lo.
ဥပ‌ဒေဘောင်အတွင်းမှ ဆိုရှယ်လစ်စံနစ်ကို တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲထူထောင်းခြင်း - (အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် ) ၊ (British)
ကချင်/Kachin/Jingphomajoi kam daw tsun ai maumwi.
စကောကရင်/Sgaw Kayinပူဧိၖလီဧိၖ; တၓတဲဒိ
ပိုးကရင်/Pwo Kayinၡါ; ပိၩ့ [T.P.] (ပူ)
ချင်း/Chin(နာမ်) inntling (နာမ်) အမိုးဒိုင်း။ တန်း။
တီးတိန်ချင်း/Tedim Chin... ... ganhingte zangh-a khiatna hoih nono nei-a kiphuak tawm taangthu tom nono; mihingte` taanga ganhingte zangh-a kiphuak taangthute.
မွန်/Mon(နာမ်) ခအိုအ္(ကၞှ)၊ ခေအာံ၊ ဇေအာံ၊ ထအုိအ္၊ ဖအုိအ္။
ရှမ်း/Shan[ၾေးပူဝ်ႇလ်] ဢပုမ်ႇ၊ ၸိူင်း၊ ၵႂၢမ်းဝူၼ်ႉသၢင်ႈႁဵတ်းဢဝ်၊ လွင်ႈလၢတ်ႈဢမ်ႇၸိုဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ၵႂၢမ်းလႅၼ်။ fabled (adj) (ဢပုမ်ႇ) ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈမီးသဵင်/ ဢၼ်ၵူၼ်းႁူႉၼမ်။
မီဇိုချင်း/Mizo(febl) n. thawnthu fing tawi; phuahchawp thil; dawt thu.
ပါဠိ/Paliākhyāna. (f) kappitakathā. (vi) 1. ākhyānāni katheti; 2. atacchaṃ pabandheti. (pp) kathitākhyāna.
ဒန္တာရီ ပုံပြင်တွင် ချီးမွမ်းထားသော ၊ [celebrate]d in [fable] or [legend
တီးတိန်ချင်း/Tedim Chinphuahtawm; dik lo;atak hi lo.
မီဇိုချင်း/Mizoadj. phuahchawp thil.
(အများပြကိန်း။ ယင်း၏ အနည်းကိန်းမှာ- fabler)
(အများပြကိန်း။ ယင်း၏ အနည်းကိန်းမှာ- fable)
(အများပြကိန်း။ ယင်း၏ အနည်းကိန်းမှာ- fabliau)
ကချင်/Kachin/Jingphori da sumpan.
စကောကရင်/Sgaw Kayinတၓကံးညၘ (အညၗ)
ချင်း/Chin(နာမ်) nikhua (နာမ်) ရာသီဥတု။
ဟားခါးချင်း/Haka Chinlungvar an ahmiahmai
တီးတိန်ချင်း/Tedim China kiphantuahakigawmtuah-a na khatakisuak sak na khatpeuh; puan kiphan; inn lamdan; inn geeldan.
မွန်/Mon(နာမ်) ဥတု၊ ရာသှ၊ ၿဗဲက်ာ။ vt.vi. ဗႜးတတ္တိတ္အာမဟြံမြဲကုဪဘဲအႏၱရာဲ။ ၂။ ဟိုတ္ႏူရာသှဥတုလုီလာ္ကႜဳင္၊ ဟိုတ္ႏူရာသှဥတုၿပံင္လွာဲကႜဳင္။ weather-beaten (adj) မႏြံကုဪ႐ုပ္ရာႀကံင္မၝဳိဟ္ ဟိုတ္ႏူသၵးဒုင္လ၀္ဘဲဒန္ရာသှဥတုဂႜဳိင္ေလာန္အာ။ weathercock / weather vane (n) လၜမေစႝာန္ထ႟းဂႜံင္က်ာကႜဳင္၊ ဗၱကဗႜိက္လၱဴကႛဳိင္က်ာ္။
ရှမ်း/Shan[ၾႃးပရိၵ်ႉၸ်] ၽႅၼ်ႇၶူဝ်း၊ ပိုၼ်ႉထၢၼ်လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ၊ လွင်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ။ silk fabric; ၽႅၼ်ႇၽေး။ fabrication(n) ၶိုင်လၢႆးလႅၼ်ၵိၼ်၊ ႁဵတ်းဢမ်ႇၸိုဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ fabrication (n) လွင်ႈႁဵတ်းဢမ်ႇၸိုဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ဢၼ်ၶိုင်/ ဝူၼ်ႉႁဵတ်းဢဝ်။
မီဇိုချင်း/Mizon. puan; ruhrel.;
ပါဠိ/Paliracanā; ghaṭanā. (nt) nimmāna; vattha; geha; mandira.
ကချင်/Kachin/Jingphogap shachyaw ai. maw ai.
စကောကရင်/Sgaw Kayin၁ ဃဲၖလီတၓ; မၖကဲထီၗတၓ
တီးတိန်ချင်း/Tedim China tuamtuamte kaaikhawm; lemtuah-a bang hiam khat suah; sing tuamtuam kilhkhawma inn suak sak; bawltawm; phuaktawm; thu hoih lo; taangthu cihte mi khat in ama deihdana phuaktawm; frabrication.
မီဇိုချင်း/Mizo(fabrikheit) v.t. phuahchawp.
ပါဠိ/Pali1. sampādeti; māpeti; 2. ayathākaroti; micchālipiṃ sampādeti. (pp) sampādita; māpita; ayathākata; micchālipiṃ sampādita.
လုပ်ကြံသော ၊ (လန်ကြုတ်ဖြစ်သော) ၊ အကြံအဖန်ဖြစ်သော ၊ [forme]d or [conceive]d by the [imagination]. [fancied]; [invented]; [fictional]; [fictitious];
ဟားခါးချင်း/Haka Chinni hna seh ti duhnak ca i chimmi capo bia;acaan lopi i capo chimmi
ချင်း/Chin(နာမ်) tawnchomnak ; lih tawnmi
မီဇိုချင်း/Mizon. dawt thu; phuahchawp thil.
ပါဠိ/Palisampādana; nipphādana; parikappana. (f) micchāracanā.
(အများပြကိန်း။ ယင်း၏ အနည်းကိန်းမှာ- fabrication)
ဟားခါးချင်း/Haka Chinhmai he aa pehtlaimi
ပါဠိ/Paliracaka; nibandhaka; māpaka.
(အများပြကိန်း။ ယင်း၏ အနည်းကိန်းမှာ- fabricator)
ဟားခါးချင်း/Haka China fawimi